Miyaad khalday xarafka 'g' noloshaada oo dhan? Daraasadani waxay cadeyneysaa | Abuurista khadka tooska ah
Waxaa laga yaabaa inaad si khaldan u qortey xarafka 'g' noloshaada oo dhan
Manuel Ramirez | | Fuentes, dhowr
Markii hore xitaa taas maanan fahmin waxaa laga yaabaa inaan khalad u qornay xarafka 'g' nolosheena oo dhan Ayaa noo sheegi lahaa in warqaddaas loo qori karo sida ay hadda noo sheegaan? Qofna, laakiin waxaa jira daraasad waxyaalaha kala nadiifisa.
Aynu nidhaahno waxaa jira laba dariiqo oo caadi ah oo loo qoro 'g' yar yar, oo sida dhowaan daraasad shaaca ka qaaday, ay adag tahay in qofna awoodo inuu qoro xarafka 'g' hal mar; gaar ahaan waxa aan ku arki karno qoraallada dhijitaalka ah ama daabacan.
Waxaan nahay oo dhan waxaa loo qori jiray 'g' yar yar dabadiisa oo furan, laakiin sidoo kale waxaa jira nooc kale oo sida caadiga ah si sax ah loogu adeegsado qoraalkan halkan ku yaal Creativos Online ama qoraaladaas daabacan. Waa si sax ah waxa jaamacadda Jon Hopkins soo ogaatay oo si qurux badan ugu yeedhay Jinni dabada 'G'.
Waxa qosolka ahi waa intaas oo kaliya mid ka mid ah 38 qof ayaa awooda inuu sawiro 'g' si gaar ah. Xitaa xiisaha badan waxay ahayd ogaanshaha in kaqeybgalayaasha daraasaddu aysan awoodin inay aqoonsadaan kan saxan labada 'g' soo socda.
Dhab ahaantii kaliya waxaa jiray 7 oo helay jawaabta saxda ah iyo inay adag tahay inaan dhahno midka saxan. Hadana hadaan ka bilowno caqabada ah inaan sawiro, waxaan helnaa qoraalkan qosolka leh ee 'g' gaarka ah.
In ka badan xiisaha ayaa leh daraasaddan oo dib u eegis ku sameyneysa caadooyinkeenna qoraal iyo waxa aan ka baran karno xarfaha alifbeetada ee ereyadeennu fahmaan. Xiisaha ayaa ugu yaraan iyo ka badan marwalba inaan diirada saarno noocyada cusub si loo qurxiyo bogagga iyo baloogyada; weligiis waxaan haynaa Monotype iyo abaalmarinteeda si aan u ogaano noocyada ugu quruxda badan oo xiiso leh xilligan Ha moogaanin iyaga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Waxaa laga yaabaa inaad si khaldan u qortey xarafka 'g' noloshaada oo dhan
Adobe wuxuu si weyn u cusbooneysiiyaa barnaamijyadan loo yaqaan 'Creative Cloud' barnaamijyadan: Premiere Pro, After Effects, Fresco, iyo inbadan
IKEA waxay rabtaa kuwa yaryar ee guriga ku jira inay abuuraan qalcado, dukaamo iyo waxyaabo kale oo badan